Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadaha oo berri furmi doona iyo Gudoomiyaha JWXO oo gaadhay Pretoria
Shirkii Jaaliyadaha oo berri furmi doona iyo Gudoomiyaha JWXO oo gaadhay Pretoria
Posted by ONA Admin	/ October 9, 2013
Waxaa wadanka Koonfur Afrika kafurmi doona inshaa allah maalinta barri ah ee taariikhdu tahay 10/10/2013 shirwaynihii caalamiga ahaa ee jaaliyaadka S.Ogaadeeniya.
Sidaa daraadeed waxaa dalka Koonfur Afrika ku soo qul qulaya marti sharafta shirka u matalaysa jaaliyaadka S.Ogaadeeniya heer dal iyo heer qaaradeedba.
Waxaa sidoo kale wadanka soo gaadhay oo lagu soo dhaweeyay magaalda Pretoria Gudoomiyaha JWXO mudane Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Waxaa kaloo yimid Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO Mudane Cabdiraxmaan Mahdi Maaday , iyo madaxa waaxda farsamada ee HWF Engineer Cabdi Miraad oo ka yimid wadanka Canada iyo Marwo Fartuun Cali oo ka timid wadanka Australia.
Waxaa hawada kusoo jira marti sharaf kale oo lagu wado in ay yimaadaan maanta illa caawa. Waxaa sii joogay marti ku suganayd tobobaadkanba wadanka Koonfur Afrika oo ku hawlan sidii ay uga faa-iidayn lahaayeen khibradooda hawleed ee ku aadan kulankan balaadhan ee sanadkan ay martigalisay JOKA.
Wariyaha wakaaladda oo goobta ku sugan ayaa noo sheegay inay jaha walba kaga soo beegan yihiin maanta magaaldaPretoriaee xarunta wadanka Koonfur Afrika xubnaha jaaliyada iyo taageerayaasha halganka gobanimadoon ee shacabka Soomaalida Ogaadeeniya oo ka kooban dhamaan umadda Somaliyeed.
Jawiga magaaladaPretoriaayaa ah caadi hadda oo waxaa laga baxay xilgii qaboobaha waxaana la joogaa xiligii kulaylaha oo qoraxda ayaa gaadha ugu badnaana 22 Degree, waxaana marmarka qaar da’aya roob aan badnayn taasoo dadka dareensiinaysa saxasaxo xoriyadeed.
Maamulka Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika oo marti galisay shirkan ayaa gacmo furan iyo kalgacalo ku soo dhawaynaya dhamaan marti sharafta dibada iyo gudahaba waxayna uga mahad celinayaan sida wanaagsan ee loo dhawray wakhtiga.